अर्थ/व्यापार Archives | Page 43 of 43 | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - सरकारले उद्योगीका समस्यालाई पन्छायो : गोल्छा - page 43
१७ जेठ, काठमाडौं । अक्सिजनका सिलिन्डर चोरिएर सगरमाथा आरोहीलाई हैरानी बेहोर्नुपरेको घटनामा वृद्धि हुन थालेको छ । उचाइमा जाँदा खुल्लारुपमा पाइने अक्सिजन घट्दै जाने भएकाले अतिरिक्त अक्सिजन प्रयोगका लागि आरोहीहरुले अक्सिजनका सिलिन्डर लगेका हुन्छन्, केही बेर अक्सिजन नपाएमा छटपटिएर मर्नुपर्ने त्यो ठाउँमा अक्सिजनका सिलिन्डर नै चोरी हुँदा कतिको ज्यानै जोखिममा पर्ने गरेको छ । विदेशी पर्वतारोही र शेर्पाहरुले सगरमाथाका उच्च शिविरमा दिन प्रतिदिन अक्सिजनका सिलिन्डर हराउन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
१२ जेठ, काठमाडौं । बाली बिमाबारे वैतडीका किसान अनविज्ञ रहेका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार जिल्लामा अहिलेसम्म किसानले बाली बिमा गरेका छैनन् । सरकारले २०६९ सालमा किसानलाई लक्षित गरेर बाली बिमा कार्यक्रम ल्याएको हो । बिमाबारे किसानले नबुझ्दा उनीहरुले बिमा नगरेका हुन् । सरकारले असिना, खडेरी, सुख्खा, रोगकीराको प्रकोपबाट बालीनालीमा क्षति पुगेमा किसानलाई बढीमा ९० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । तर किसानले बिमा नै नगरेकाले क्षति भए पनि क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका सूचना अधिकृत कर्णबहादुर चन्दले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
‘हिलारी स्टेप’ भत्किएको भन्ने खबर सँचो होइन : पथ प्रदर्शक शेर्पा
१२ जेठ, काठमाडौं । सगरमाथाको–आठ हजार मिटरमाथि रहेको ‘हिलारी स्टेप’ भत्किएको भन्ने खबर केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्ययममा आइरहेकामा सो कुरा सत्य नभएको सगरमाथाका पथ–प्रदर्शक पासाङ तेन्जिङ शेर्पाले दावी गरेका छन् । शेर्पासहित आरोहण गरेर फर्किएका दुई नेपाली आरोही र एक पर्वतारोहण अधिकारीले सगरमाथाको चुचुरो नजिकै रहेको हिलारी स्टेप पहिलेकै अवस्थामा रहेको बताएका हुन् । बाटो बनाउने काममासमेत संलग्न पथ–प्रदर्शक शेर्पाले भनेका छन् “यसपटक हामीले हिलरी स्टेपभन्दा छेउतिरको डिलैडिलमा बाटो बनाएका छौँ ।	थप पढ्नुहोस्
राष्ट्रिय सभागृहबाट पद्मोदय मोडसम्मको बन्द सडक खुल्यो
९ जेठ, काठमाडौं । नेपाल बहस डटकम लगायत धेरै अनलाइन न्यूज पोर्टलहरुले हिजो ‘माथिको आदेश’ भन्दै सभागृहको सडक नखोल्दा सवारी जाम र यात्रुलाई सास्ती’ शीर्षकमा सम्प्रेषित समाचारका कारण एक सातादेखि राष्ट्रिय सभागृहबाट पद्मोदय मोडसम्मको बन्द सडक खुलेको छ । हिजो सो समाचारलाई धेरै अनलाईनहरुले प्रकाशन गरेका थिए । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनाका लागि सुरक्षाको कारण देखाउँदै एक सातादेखि राष्ट्रिय सभागृहबाट पद्मोदय मोडसम्मको बाटो बन्द गरिएको थियो । मतगणना हुँदा गाडी रोकिएकाले दैनिक सयौँ सवारी साधन र हजारौँ यात्रु सास्ती खेप्न बाध्य भएका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
सगरमाथामा अमेरिकी आरोहीको मृत्यु, १२० आरोही शिखरमा
८ जेठ, काठमाडौं । सगरमाथा आरोहणका क्रममा ५० वर्षीय अमेरिकी नागरिक रोल्याण्ड एयर उडको मृत्यु भएको छ । चिकित्सकसमेत रहेका उनको आइतबार आठ हजार ४०० मिटरको उचाइमा ज्यान गएको प्रहरी नायब उपरीक्षक माधब बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनीसँगै यस वर्ष सगरमाथामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३ पुगेको छ । यसअघि नेपाली नागरिक मीनबहादुर शेरचनको आधार शिविरमा ज्यान गएको थियो भने स्वीस नागरिक युली स्टेकको पनि आधार शिविरमै ज्यान गएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
‘माथिको आदेश’ भन्दै सभागृहको सडक नखोल्दा सवारी जाम र यात्रुलाई सास्ती
७ जेठ, काठमाडौं । गत एक सातादेखि राष्ट्रिय सभागृहबाट पद्मोदय मोडसम्मको सडक बन्द गरिएको छ । दैनिक सयौँको संख्यामा सवारीसाधन र पैदलयात्री हिँड्दै आएको सो बाटो बन्द गरिँदा सवारी साधन र यात्रु सास्ती खेप्न बाध्य छन् । राजधानीको मुटुमा रहेको यो सडक बन्द हुँदा सहरका मुख्य भागमा जाम हुने गरेको छ । यो सडक बन्द भएको निहुँ पारेर उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका यातायात व्यवसायीले मन लागे सवारी चलाउने मन नलागे बाटो बन्द छ भन्दै ग्यारेजमा थन्क्याएर राख्दा यात्रु दोहोरो मर्कामा परेका छन् । सवारी नपाउँदा यात्रु राति अबेरसम्म पैदल हिँड्न बाध्य छन् ।	थप पढ्नुहोस्
किन आए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चितवनमा ?
५ जेठ, चितवन । छोरी रेणु दाहालको मतगणना माथि अनेक आसंका र बहस भइरहदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज चितवन आएका छन् । तर प्रचण्ड छोरीको मतगणनालाइ प्रभावित पार्न नभई रामपुरमा रहेको देशकै एकमात्र कृषि तथा वन बिज्ञान विश्वविद्यालयको नवनिर्मित केन्द्रीय कार्यालय भवन उदघाटन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चितवन आएका हुन् । दिउँसो साढे १२ बजे विश्वविद्यालयको नवनिर्मित भवन उदघाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. इश्वरीप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत हुन् ।	थप पढ्नुहोस्